Buddhavani | Mahavani | के प्राप्त गर्नेलाई भिक्षु भन्दछन् ? सभिय परिव्राजकको प्रश्न | |बुध्दबाणी
के प्राप्त गर्नेलाई भिक्षु भन्दछन् ? सभिय परिव्राजकको प्रश्न
Published on 2020-02-21 / बुध्दबाणी
यस्तो मैले सुनें ।
एक समय भगवान राजगृह स्थित वेणुवनको कलन्दक निवापमा बसिरहनु भएको थियो । त्यस समय सभिय परिव्राजकलाई उनका पुराना एक हितैषी देवताले “सभिय ! जुन श्रमण वा ब्राम्हणले यी प्रश्नहरू सोध्दा तिमीलाई उत्तर दिन सक्नेछन् त्यसैकहाँ ब्रम्हचर्यवास गर” भनी प्रश्नहरू सिकाएका थिए । अनि ती देवतासँग प्रश्नहरू सिकी सभिय परिव्राजक जो ती पूरण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकुध कात्यायन, सञ्जय बेलठ्ठटपुत्र र निगण्ठनाटपुत्र जस्ता संघी, गणी, गणाचार्य, ख्यातिप्राप्त, यशस्वी, तीर्थकर तथा धेरैबाट साधुसम्मत प्राप्त श्रमण ब्राम्हणहरू छन् तिनकहाँ गई प्रश्नहरू सोध्दथे । सभिय परि– व्राजकका प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरू ठीकसँग दिन सक्दैनथे ।
उनको मनमा यस्तो लाग्यो— “यी श्रमण गौतम पनि संघी, गणी, गणाचार्य, ख्यातिप्राप्त, यशस्वी, तीर्थकर तथा धेरैबाट साधुसम्मत प्राप्त हुन् । अतः किन म श्रमण गौतमकहाँ गई यी प्रश्नहरू नसोधौं !
”फेरि उनको मनमा यस्तो लाग्यो— “जो ती पूरण काश्यप, र निगण्ठनाटपुत्र जस्ता जीर्ण, वृद्ध, बैँश प्राप्त, धेरै दिन भएका, उमेर पूरा भएका, स्थविर, रात्रज्ञ, धेरै समयदेखि प्रव्रजित भएका, संघी, गणी, गणाचार्य र धेरैबाट साधुसम्मत प्राप्त श्रमण ब्राम्हणहरू हुन्— उनीहरूसँग प्रश्न सोध्दा पनि उनीहरूले ठीकसँग उत्तर दिन सकेनन् । उत्तर दिन नसकेपछि कोप, द्वेष र अप्रसन्नता प्रकट गरी मसँगै प्रश्न सोध्छन् भने यी श्रमण गौतमले के यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्लान् र ! श्रमण गौतम जन्मले पनि तरुण छन् तथा प्रव्रज्यात्वले पनि नयाँ नै छन् ।”
फेरि सभिय परिव्राजकको मनमा यस्तो लाग्यो— “श्रमणहरू तरुण छन् भनी उनीहरूलाई अपमान र हेला गर्न हुन्न । तरुण भए पनि श्रमणहरू महद्र्धिक र महानुभाव हुन्छन् । अतः श्रमण गौतमकहा“ गई किन म यी प्रश्नहरू नसोधुँ ।”
यति सोची सभिय परिव्राजक जहाँ राजगृह स्थित बेणुवनको कलन्दकनिवाप हो, जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गए । त्यहाँ पुगेपछि भगवानसँग सम्मोदन गरे । सम्मोदनीय कुशलवार्ता गरिसकेपछि एक छेउमा बसे । एक छेउमा बसेका सभिय परिव्राजकले भगवानलाई गाथाद्वारा यसो भने—
“शंका र उपशंका लिई म प्रश्न सोध्ने विचारले तपाईकहाँ आएको छु । मैले सोधेका प्रश्नहरूको अन्त गरिदिनुहोस् र क्रमानुकूल तथा धर्मानुकूल उत्तर दिनुहोस्! ।
१— “प्रश्न सोध्ने इच्छा गरी तिमी टाढैदेखि आएका छौ । तिम्रा प्रश्नहरू सुनेर क्रमानुकूल र धर्मानुकूल भनी त्यसको समाधान गरिदिने छु ।”
उनी हर्षित भई प्रीतिसौमनस्यानुभव गरी भगवानसँग प्रश्न सोधे—
(क) “के प्राप्त गर्नेलाई भिक्षु भन्दछन् ?
कसरी शान्तवान् हुन्छ ?
कसरी दान्त हुन्छ ? कसरी बुद्ध भनिन्छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर भगवानले दिनुहोस् ।”
१ “आपैm गएको बाटोबाट जसले परिनिर्वाण प्राप्त गर्छ, शंका दूर गर्छ, भव र विभवलाई त्यागी बस्छ र जसको पुनर्भव हुन्न उही भिक्षु हो ।”
२— “स्मृतिमान् तथा उपेक्षी भई जो बस्छ, जसले यस लोकमा कसैको पनि हिंसा गर्दैन र उत्तीर्ण तथा निर्लिप्त भएको जो श्रमणमा क्लेशहरू हुन्न्— उही शान्तवान् हो ।”
३— “जसका इन्द्रियहरू भित्र र बाहिर सबैतिर आफ्नो बशमा छन्, जसले यो लोक र परलोकलाई जान्दछ र समय (मृत्यु) को प्रतीक्षा गर्छ— उही दान्त हो ।”
४— “सबै कल्पनाहरूलाई र संसारमा उत्पन्न र च्युत हुने दुबैलाई जानी क्लेशहरूबाट दूर भई विशुद्ध हुने तथा जसको जन्म क्षीण भइसक्यो— उही बुद्ध हो ।”
अनि सभिय परिव्राजकले भगवानको भाषणलाई अभिनन्दन र अनुमोदन गरी सन्तुष्ट तथा प्रफुल्लित र प्रीतिसौमनस्यानुभव गरी भगवानसँग अर्को प्रश्न सोधे—
(ख) “के प्राप्त गर्नेलाई ब्राम्हण भन्दछन् ?
कसरी श्रमण हुन्छ ?
कसरी स्नातक हुन्छ ?
कसलाई नाग भनिन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर भगवानले दिनुहोस् ।”
१— “जो सबै पापहरूलाई पखाली निर्मल भई समाधिमा समाहित भई, संसारबाट मुक्त भई, केवली भई, अनाश्रित भई तथा अकम्पित र स्थिर भई बस्छ— उही ब्राम्हण (श्रेष्ठ) हो ।”
२— “जो पुण्यपापलाई हटाई समन गरी बस्छ, जो इहलोक र परलोकलाई जानी निर्मल भई बस्छ, जो जन्ममरणबाट मुक्त छ तथा जो स्थिर र अकम्पित भई बस्छ— उही श्रमण हो ।”
३— “जसले भित्री र बाहिरी सबै लोकका पापहरू धोइसक्यो, जो देवमनुष्य लोकमा नजन्मिने तथा तृष्णा नहुने हो— उही स्नातक हो ।”
४— “जसले यो लोकमा कुनै रहस्यमय काम गर्दैन, जसले संयोजन बन्धनहरूलाई चुँडालिसक्यो, जो कतै नअल्झी विमुक्त भई अकम्पित र स्थिर हुन्छ— उही नाग हो ।”
अनि सभिय परिव्राजकले भगवानको भाषणलाई अभिनन्दन र अनुमोदन गरी सन्तुष्ट तथा प्रफुल्लित र प्रीतिसौमस्यानुभव गरी भगवानसँग अर्को प्रश्न सोधे—
(ग) “बुद्धहरू कस्तालाई क्षेत्रजित भन्दछन् ? कसरी कुशल हुन्छ ? कसरी पण्डित हुन्छ ? कसरी मुनि हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर भगवानले दिनुहोस् ।” भगवान भन्नुहुन्छ—
१) “जो दिव्यक्षेत्र, मनुष्यक्षेत्र तथा ब्रम्हक्षेत्र आदि क्षेत्रहरूको खोज गरी सबै क्षेत्रमूल र बन्धनबाट मुक्त भई अकम्पित र स्थिर हुन्छ— उही क्षेत्रजित हो ।”
२— “जो दिव्य मनुष्य र ब्रम्हकोषलाई राम्ररी अन्वेषण गरी यी सबै कोषहरूको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ र अकम्पित तथा स्थिर भई बस्छ— उही कुशल हो ।”
३— “जो शुद्ध प्राज्ञपुरुष भित्री र बाहिरी दुबैतिर अन्वेषण गरी कृष्ण र शुक्ललाई हटाई अकम्पित र स्थिर भई बस्छ— उही पण्डित हो ।”
४— “सत् असत् धर्मलाई जानी भित्री र बाहिरी सबै लोकलाई जानी देवमनुष्यहरूद्वारा पूज्य भई बन्धनरूपी जालबाट जो मुक्त छ— उही मुनि हो ।”
अनि सभिय परिव्राजकले भगवानको भाषणलाई अभिनन्दन र अनुमोदन गरी सन्तुष्टिता तथा प्रफुल्लित र प्रीतिसौमनस्यानुभव गरी भगवानसँग अर्को प्रश्न सोधे—
(घ) “के प्राप्त गरेकालाई वेदगु (सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त) भन्दछन् ?
कसरी अनुविज्ञ हुन्छ ?
कसरी वीर्यवान् हुन्छ ?
को आजानीय हो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर भगवानले दिनुहोस् ।”
१— “जसले श्रमण ब्राम्हणहरूका सबै शास्त्र (समाधि) लाई जान्दछ, जो सबै वेदनाहरूबाट विरक्त छ र जो ज्ञानमा पारंगत छ— उही वेदगु हो ।”
२— “जो प्रपञ्च तथा नामरूपलाई जानी भित्री र बाहिरी शारीरि क रोगजरोलाई जानी सबै रोगजरो तथा बन्धनबाट मुक्त भई अकम्पित र स्थिर भई बस्छ— उही अनुविज्ञ हो ।”
३— “जो सबै पापहरूबाट दूर भई नारकीय दुःखबाट पारभई वीर्यवान्, उद्यमी, धीर, अकम्पित र स्थिर छ— उही वीर्यवान् हो ।”
४— “जसको भित्री र बाहिरी बन्धनका जराहरू उखेलिसके, जो सबै बन्धनको बन्धनबाट मुक्त छ, जो अकम्पित र स्थिर छ—उही आजानीय हो ।”
(ङ) “के प्राप्त गरेकालाई सोत्तिय (श्रुतवान् शास्त्री) भन्दछन् ?
कसरी आर्य हुन्छ ?
के गरेपछि चरणवान् हुन्छ ?
परिव्राजक को हुन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर भगवानले दिनुहोस् ।”
१— “श्रुतमय ज्ञानद्वारा जसले यो लोकमा भएभरको सदोष र निर्दोषलाई सुनी राम्ररी जानी शंकासन्देहबाट दूर भई सबै ठाउँमा निदुःखी भई बस्छ— उही सोत्तिय (श्रुतवान् शास्त्री) हो ।”
२— “जसले सबै आस्रव र आलयहरूलाई छेदन गर्छ त्यस्ता विद्वान् गर्भवासमा उत्पन्न हुन्न । विविध संज्ञा र क्लेशलाई नष्ट गरी जो संसारचक्रमा पर्दैन— उही आर्य हो ।”
३— “जो यहाँ चरणधर्महरूमा परिपूर्ण हुन्छ र कुशल धर्महरूलाई सँधै जान्दछ अनि कहिं आसक्त हुन्न, विमुक्त हुन्छ तथा जसको कतै द्वेषभाव हुन्न र शान्त हुन्छ— यही चरणवान् हो ।”
४— “जुन माथि तल तेस्रो र सबैको बीचमा रहेको कर्मको दुःख विपाकलाई त्यागी ज्ञानपूर्वक आचरण गरी माया, ममता, अहंकार, लोभ, क्रोध तथा नामरूपको अन्त गरी प्राप्त गर्नुपर्नेलाई प्राप्त गर्छ— उही परिव्राजक हो ।”
अनि सभिय परिव्राजकले भगवानको उपदेशलाई अभिनन्दन र अनुमोदन गरी सन्तुष्टिता तथा प्रफुल्लित र प्रीतिसौमनस्यानुभव गरी आसनबाट उठी उत्तरासङ्ग एकांश पारी जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यतातिर अभिवादन गरी उहाँकै सन्मुख अनुकूल गाथाहरूद्वारा स्तुति गरे—
१— “श्रमणहरूको ब्यवहार र कल्पनाको आधारमा हुने जुन त्रिसठ्ठी दृष्टिहरू हुन् ती दृष्टिरूपी बाढीबाट भूरिप्रज्ञा हुनुभएका तपाई उत्तीर्ण हुनु भएको छ ।”
२— “दुःखको अन्त गरी तपाई पारहुनु भएको छ । म विश्वास गर्छु, तपाई अरहत् सम्यक्सम्बुद्ध क्षीणास्रवी हुनुहुन्छ । ज्योतिर्मान्, मुक्तिमान्, प्रसस्त प्रज्ञा हुनु भएका तथा दुःखान्त गर्नुहुने तपाईले मलाई तार्नुभयो ।”
३— “शंका र सन्देह हुने भनी जान्नु भई तपाईले मलाई त्यसबाट पार तारिदिन’भयो । मुनि हुनु भएका तपाई मुनिपथमा परिपूर्ण हुनुहुन्छ र तपाई आदित्यबन्धु शान्त हुनुहुन्छ .”
४— “जो ममा अघि शंका थियो त्यसबारे तपाईले बताइदिनुभयो । तपाई सम्बुद्ध निश्चय नै मुनि हुनुहुन्छ र तपाईमा नीवरण पनि छैन .”
५— “तपाईले सबै प्रकारका शोकहरूलाई ध्वस्त पारी निर्मूल पारिसक्नुभयो । तपाई शान्त, दान्त, धृतिमान् तथा सत्यवादी हुनुहुन्छ ।”
६— “श्रेष्ठहरूमध्येमा श्रेष्ठ हुनु भएका तपाई महावीरको भाषणलाई दुइ नारद देवगणहरू सहित सबै देवहरूले अनुमोदन गर्छन् .”
७— “पुरुषहरूमध्येमा श्रेष्ठ र उत्तम हुनु भएका तपाईलाई मेरो नमस्कार छ । देव सहित लोकमा तपाई बराबरका पुरुष कुनै छैनन् ।”
८— “तपाई बुद्ध हुनुहुन्छ, तपाई शास्ता हुनुहुन्छ र तपाई मार विजेता पनि हुनुहुन्छ । अनुशयलाई छेदन गरी उत्तीर्ण हुनु भएका तपाईले मलाई पनि उत्तीर्ण गराउनुभयो ।”
९— “वासना बन्धनहरूबाट तपाई पार हुनुभयो । आस्रवहरूलाई तपाईले नाश गर्नुभयो । उपादान र भय नहुने तपाई सिंह हुनुहुन्छ ।”
१०— “सुन्दर पद्मकमलको पूmलमा जसरी पानी अड्दैन त्यस्तै गरी तपाई पुण्य र पापमा लिप्त हुनुहुन्न । हे बीर ! खुट्टा पसार्नुहोस् । शास्तालाई सभिय वन्दना गर्छ ।” अनि भगवानको पाउमा शीरले ढोगी सभिय परिव्राजकले भगवानसँग यस्तो विन्तिगरे—
“धन्यहो भन्ते ! धन्यहो भन्ते ! भन्ते ! जस्तै घोप्टेकोलाई उत्तानो पारिदिंदा वा ढाकेकोलाई उघारिदिंदा वा बाटो भुलेकोलाई बाटो देखाइदिंदा अथवा अन्धकारमा तेलको दियो बालिदिंदा आँखा हुनेले रूप देख्दछन् त्यस्तैगरी तपाईले मलाई अनेक प्रकारले धर्म प्रकाश पारिदिनुभयो । अब म भगवानको शरणमा पर्छु, धर्म र भिक्षुसंघको पनि । भन्ते ! भगवानको समक्ष मैले प्रव्रज्या र उपसम्पदा पाऊँ ।”
“सभिय ! अघि अन्यतीर्थिय परिव्राजक भएकाले यस धर्मविनयमा प्रव्रज्यात्व र उपसम्पदा चाहन्छन् भने त्यस्ताले चारमहीनासम्म परि– वास (परिक्षणार्थ) बस्नुपर्छ । चारमहीनापछि आराधित भएका भिक्षुहरूले उसलाई भिक्षुत्वको निमित्त प्रव्रजित र उपसम्पदा गर्छन् । तर मलाई व्यक्ति विशेषताको कुरा पनि थाहा छ ।”
“भन्ते ! यदि यस धर्मविनयमा प्रव्रज्या र उपसम्पदा चाहने अन्यतीर्थियहरूले चारमहीनासम्म परिवास बस्नुपर्छ र चारमहीना परिवास बसिसकेपछि आराधित भएका भिक्षुहरूले भिक्षुत्वको निमित्त उसलाई प्रव्रजित र उपसम्पदा गर्छन् भने म चारवर्ष परिवास बस्नेछु । चारवर्ष पछि यदि भिक्षुहरू आराधित भएमा भिक्षुत्वको निमित्त मलाई प्रव्रजित र उपसम्पदा गरुन् ।”
अनि सभिय परिव्राजकले भगवानकहाँ प्रव्रज्या र उपसम्पदा पाए । उपसम्पदा भएको चिरकाल नबित्दै आयुष्मान् सभिय अरहन्तहरू मध्ये एक भए ।